कथित ‘इन्काउन्टर’को छानविन गर्न दवाव, एसएसपी सिंहको यस कारण जान सक्ने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
कथित ‘इन्काउन्टर’को छानविन गर्न दवाव, एसएसपी सिंहको यस कारण जान सक्ने
प्रकाशित मिति २२ श्रावण २०७५, मंगलवार ०९:३५ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापाले सम्हालेसँगै शान्ति सुरक्षा सुधारको आशा धेरैले गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री थापाले शान्ति सुरक्षाभन्दा पनि सानातिना कुरामा धेरै जोडदिए । जसका कारण राजधानीसहित देशभरि हत्या र हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थापालाई शान्ति सुरक्षा मजबुद बनाउन कसले रोक्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ । त्यति मात्रै होइन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा र उनका साथीहरूले प्रहरी सरुवा, बढुवामा हस्तक्षेप गरेकै कारण देशको शान्ति सुरक्षामा समस्या आएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकास र समृद्धिको नारा लिएका छन् । उनले सोही अनुसारको काम पनि गर्दै आएका छन् । तर, ओलीको अभियानलाई इमान्दारिताका साथ सहयोग मिल्ने गरेर गृहमन्त्री थापा मात्रै होइन अन्य धेरै मन्त्रीहरूका कामकारबाहीले म्याच गरिरहेको छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा काठमाडौंको काँडाघारीस्थित हाइल्यान्ड स्कुलमा कक्षा ६ मा पढ्ने ११ वर्षीय निशान खड्का अपहरणमा परेर ज्यान गुमाउनु परेको छ । विविभन्न जिल्लाहरूमा बलात्कार र हत्याका घटनाले तिब्रता पाइरहेको छ ।
राजधानी शान्ति सुरक्षाको हिसावले सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । तर, काठमाडौंभित्रै अपहरण, हत्या र बलात्कारका घटना बढ्नुमा जिम्मेवारी लिएर बसेका सुरक्षा अधिकारीमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ ।
पहुँच र राजनीतिक दवावमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेल र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो समय नेकपाकी सांसद निरु पाललाई पेस्तोल तेर्छाउने व्यक्तिको खोजीमा दिनरात लगाएका उनीहरूले बालक अपहरण भएको सूचना समयमा पाउँदा पनि किन बचाउन सकेनन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।
त्यति मात्रै होइन कोठाबाट पक्राउ परेका दुईजना अभियुक्त गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टरका नाममा हत्या भयो भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उब्जिएको छ । बालक अपहरण गरेर हत्या गर्ने ती दुई अभियुक्तलाई नक्कली मुठभेडका नाममा गरिएको इन्काउन्टरले एसएसपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
सन्बिन्धत निकायले यस विषयलाई यतिकै छाड्नु हुँदैन । एउटा स्वतन्त्र छानविन समिति बनाएर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । होइन भने प्रहरीमाथिको विश्वसनीयता गुम्नेछ ।
निशानलाई अपहरण गर्नेहरूको अचानक पौने ९ बजे चमेलीको मोबाइलमा फोन आएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । अपहरणकारीले ‘तिम्रो छोरा हाम्रो कब्जामा छ, ४० लाख रुपैयाँ तयार पार’ तत्कालै चमेली खड्काले गुहार मागिन् । छिमेकीहरू जम्मा भए । प्रहरीलाई खबर भयो । तर, रातभरिको प्रयासबीच पनि बालक भेटिएनन् ।
गोपाल र उनका साथी अजय तामाङले सानोठिमीस्थित आफ्नो डेरामा राति ढिलो फर्कने जानकारी गराएका थिए । उनीहरू राति १२ बजेमात्रै फर्किए ।
पछिल्लो जानकारीअनुसार उनीहरूले त्यतिवेलासम्म बालकको अपहरण र हत्या गरेर खाल्डोमा गाड्नसमेत भ्याइसकेका थिए । डेरामा फर्कंदा पूरै हिलाम्य भएको र राति नै लुगा र जुत्ता धोएर रेलिङमा सुकाएको उनका छिमेकीहरूले बताएका छन् । बिहान ७ बजे नै प्रहरी उनीहरूको डेरामा पुग्यो र ढोका लगाएर बाहिर छिमेकीले समेत सुन्ने गरी पिट्यो ।
उनीहरूकै बयानका आधारमा बालकको हत्या भएको जानकारी मिल्यो । गोपाल र अजयका घरबेटीले ठिमीकै नगदेश्वरमा बनाइरहेको नयाँ घरको पछाडिपट्टि खाल्डो खनेर बालकको शव पुरेको भन्ने उनीहरूको बयान पुष्टि भयो । किनकि, प्रहरीले त्यहाँबाट केहीवेरमै शव निकाल्यो । त्यतिन्जेलसम्म घरबाहिर भिड जम्मा भएको थियो ।
आरोपी दुवैलाई आँखामा पट्टी बाँधेर बाहिर निकाल्यो, गाडीमा राखेर लिएर गयो । ११ बजे दुवै आरोपीलाई गाडीमा राखेर लगिएको थियो । दिउँसो १ बजे खबर आयो, घ्याम्पेडाँडामा प्रहरीसँगको मुठभेडमा दुई अपहरणकारीको मृत्यु ।
अपहरणकारी इन्काउन्टरमा मारिएको खबरले सामाजिक सञ्जालमा उत्साह जाग्यो । प्रहरीलाई फेसबुक र ट्वीटरमा प्रशंसा भयो । यसले ‘हिरोइज्म’ जमाउने प्रहरी अधिकारीको महत्वाकांक्षा पूरा भएको छ ।
प्रहरीले बालकलाई किन बचाउन सकेन भन्ने मूल विषय ओझेलमा परेको छ । प्रहरीले आरोपीलाई गिरफ्तार गरेको ठाउँभन्दा ११ किलोमिटर टाढा जंगलमा लगेर इन्काउन्टरको नाममा मार्दा अपहरण र हत्याको उद्देश्य के थियो भन्ने विषयको अनुसन्धान स्वतः कमजोर भएको छ । किनकि, अपहरण र हत्या किन गरिएको थियो भनेर बयान दिन सक्ने दुवैजना मारिएका छन् ।
उनीहरू जंगलमा भाग्दै गरेको अवस्थामा मारिएको भन्ने प्रहरीले दाबी गरिसकेकाले त्यसअघि उनीहरूले आफ्नो डेरामा दिएको बयानसमेत औचित्यहीन भएको छ ।
अख्तियारले किन देख्दैन घ्याङ, मठ मन्दिरका भ्रष्टहरू ?
काठमाडौं । नेपालको घ्याड्ड गुठी, मठ मन्दिर सम्बन्धी हालका बर्षहरूमा परम्परा र मान्यतालाई जोगाउनेगरी नीति निर्धारण नगर्नाले प्राचीनकालदेखिको सरकारी…
कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रधानसेनापति क्षत्रीको विदेश भ्रमण
काठमाडौं । आफ्नो कार्यकालको दिनगन्ती सुरु भए पनि प्रधानसेनापति महारथी राजेन्द्र क्षत्री मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको…
विदेश भ्रमणमा ब्रह्मलुट: वर्षभरिको खर्च ६ महिनामा सकियो, थप ४१ करोड ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थप खर्च !
काठमाडौं । भत्ताकै लागि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति नरोकिएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कमैचारीको विदेश भ्रमणका लागि छुट्याएको बजेट…
बाढीः भक्तपुरमा तीन जनाको ज्यान लियो, काभ्रेमा १७ जना मजदुर खोलामा फसे
काठमाडाैं । भक्तपुरमा बाढीपहिरोले तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोले टहरा भत्काएपछि एकैघरका तीनजनाको मृत्यु भएको प्रहरी उपरीक्षक…